Global Voices teny Malagasy » Mitolona hanana zo ho afaka mifidy ireo pelaka any Salvadaoro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Mey 2021 19:12 GMT 1	 · Mpanoratra Carlos Lara Nandika (fr) i Chloé Bonvallet, avylavitra
Sokajy: El Salvador, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Ny Tetezana - The Bridge
Diabe iray nanoherana ny fanavakavahana pelaka tao Salvadaoro tamin'ny 2019. Sary an'i Paula Rosales , nahazoana alàlana.
Ny 18 Febroary 2021 no nivoaka tamin'ny fiteny espaniôla ny lahatsoratra niaingàna .
Ny 28 Febroary no nikarakaran'i Salvadaoro ny fifidianana  [fr] solombavambahoaka, ny ben'ny tanàna sy ny fifidianam-paritra. Na misy aza ny fenitra napetraky ny lalàna mba hiantohana ny fahafahan'ny olompirenena lahy sy vavy mifidy ao Salvadaoro, mitohy ihany ny fanavakavahana an'ireo olona pelaka sy tsy lahy tsy vavy. Mba hanovàna izany, isan'ireo olona 14 LGBTQI noraisin'ny Fitsarana Avo misahana ny Fifidianana (TSE) aty Salvadaoro aho. Miady manohitra ny fanavakavahana izahay ary manao hetsika ho an'ireo olona pelaka, tsy lahy tsy vavy mba hahafahan'izy ireny mifidy ao Salvadaoro, amin'ny alàlan'ny fametrahana fandaharanasa fampiofanana any anatin'ireo biraom-pifidianana.
Ny tena sakana goavana ao Salvadaoro dia ny tsy fisian'ny lalàna iray mamaritra ny maripamantarana ny olona  izay tokony hahafahan'ireo olona nanova fananahana hanova koa ny anarany sy ny maripamantarana azy any anatin'ireo taratasy mombamomba azy. Manohintohina ny fahafahana misitraka ny marobe amin'ireo zo izany, toy ny fampianarana ny fahasalamàna, ny asa, ny fifidianana ary ny maro hafa.
Ohatra, ny karapanondro (antsoina hoe « Documento Único de Identidad » na DUI ao Salvadaoro), dia afaka ahitàna ny anarana sy ny maripamantarana tsy mitovy amin'izay lazain'ilay olona tompony. Fialàna bàla  ampiasaina matetika io mba hanakànana ireo olona niova fananahana tsy ho afaka hifidy. Nandritra ireo fifidianana tany aloha, nosakanan'ny mpikambana ao anaty biraom-pifidianana, izay tomponandraikitra amin'ny dingam-pifidianana, tsy hahazo mandatsa-bato ireo olona niova fananahana, noho io antony io, izay tsy azo hamarinina araka ny lalàna akory. Araka ny voalazan'ny andininy faha 7 sy faha 9 ao amin'ny Lalàm-pifidianana  [pdf], ny maripamantarana ny olona iray dia sady tsy fepetra takiana, no tsy antony hanakanana olona iray tsy hifidy.
Carlos Lara, mpanoratra, miresaka ny fahafahana mandeha mifidy ho an'ny olona LGBTQI, tao amin'ny ivontoerana iray fiofanana ao Jiquilisco, Usulután. Sary an'i Raul Benitez , mpanao gazety, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Fa ny toetra feno fankahalàna pelaka sy ireo nanova fananahana dia manomboka vantany vao miditra ny biraom-pifidianana ny olona iray LGBTQI, ary indrindra fa hoe ireo nanova fananahana, ireo lehilahy pelaka “niova ho vehivavy” sy ireo vehivavy “niova ho lehilahy”, . Hehy, siotsioka, horakoraka na feno hafa manambany ary ompa no andraisana azy. Torahana rano, voankazo na legioma lò, ary tsy misy olona na iza na iza mihetsika manohitra izany. Tamin'ny 2014, vehivavy iray nanova fananahana, Stacy Araujo, niharan'ny herisetra ara-batana  tao anaty biraom-pifidianana notantaniny.
Tamin'ny 2014, nandeha nankany  San Marcos mba hifidy i Camila Portillo, vehivavy iray nanova fananahana, saingy nolavin'ny sekretera tao amin'ilay biraom-pifidianana ny hanome azy biletà. Taorian'ny nampandrenesany ireo fikambanana pelaka, izay nihetsika koa nanaitra ireo mpanaramaso iraisampirenena, izay izy vao afaka nifidy.
Ao Salvadaoro, matetika ny vondrompiarahamonin'ireo pelaka no mizaka fanafihana mahery setra. « Raha kely indrindra dia 20 ireo vehivavy nanova fananahana – 16 hatramin'ny 32 taona – no maty nisy namono tao amin'io firenena io teo anelanelan'ny 2017 sy 2019 », hoy ny lahatsoratra iray tao amin'ny DW .
Vehivavy nanova fananahana, eo am-panatanterahana ny latsabatony tao amina biraom-pifidianana tao San Salvador. Sary an'i Raul Benitez , mpanao gazety, nahazoana alàlana.
Na misy ampahany amin'io vondrompiarahamonina io sahy manohy mijoro  hatrany aza, niaraka niasa tamin'ny Fitsarana Avo misahana ny Fifidianana ireo fikambanana LGBTQI mba hiantohana ny fahafahana mifidy ho an'ny vondrompiarahamonina LGBTQI. Volana maro talohan'ny fifidianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna tamin'ny 2018, vehivavy roa nanova fananahana no nokaramain ‘ny Fitsarana Avo misahana ny Fifidianana, niampy lehilahy roa pelaka mba hanofana ireo mpiasa. Nandritra ireo fifidianana tamin'ny 2019, nitombo ny isan'ireo mpampiofana, lasa efatra ambinifolo ilay efatra teo aloha. Ho an'ireo fifidianana ho avy, izay nofaritana ho ny 28 Febroary 2021, mbola olona 14 ihany izahay, ary anisany aho, ary miezaka izahay ny ho tonga any amin'ireo rehetra ivontoerana fanofanana manerana ny firenena.
Mandritra ireny fanofanana ireny, betsaka ireo torohevitra omenay. Ohatra, na iray aza mpikambana ao anaty biraom-pifidianana dia tsy misy afaka handroaka olona iray nanova fananahana ka asaina miverina rehefa mitafy mifanaraka amin'izay maripamantarana nanondroana azy tao anaty karapanondrony. Tsy fanajàna izany, ankoatry ny maha-heloka azy: araka ny fampahatsiahivan'ny andininy faha 295 ao anaty Lalàna Famaizana Salvadoriàna  [pdf], voaràra ny manakana olona iray tsy hisitraka ny zony hahazo mifidy.
Izany asa rehetra izany dia tohanan'ny Fanambarana Erantany Momba ny Zon'Olombelona  [fr] (and. 1, 2, 7) ; sy ny andininy faha 3 amin'ny Lalampanorenan'ny Repoblika , ary ny Lalàm-pifidianana ao Salvadaoro  izay miantoka ny fitoviana eo amin'ny olona rehetra no sady manindry fa na lahy na vavy dia zo sy adidintsika rehetra ny mifidy (and. 3, 4, 7, 9).
Ny mpanao gazety mametraka fanontaniana amina mpikambana iray avy amin'ny fiaraha-mientan'ireo LGBTQI. Sary an'i Raul Benitez , mpanao gazety, nahazoana alàlana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/04/151998/
 Paula Rosales: https://twitter.com/rosalespaula
 lahatsoratra niaingàna: https://es.globalvoices.org/2021/02/18/poblacion-transgenero-en-el-salvador-lucha-para-tener-el-acceso-al-voto/
 lalàna iray mamaritra ny maripamantarana ny olona: https://www.lavanguardia.com/vida/20200715/482329081031/ong-salvadorenas-preocupadas-por-silencio-de-parlamento-sobre-ley-de-genero.html
 Fialàna bàla: https://www.iwmf.org/reporting/voto-trans-plantar-cara-al-estigma/
 Raul Benitez: https://twitter.com/raulebenitez?lang=es
 Tsy isan'ny : https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/nuestro-estado-es-laico/659897/2019/
 niharan'ny herisetra ara-batana: http://www.corresponsalesclave.org/2014/03/trans-ejercen-su-derecho-al-voto-en-el-salvador.html
 nandeha nankany: http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/derechos-humanos/el-voto-un-triunfo-para-comunidad-transexual
 sahy manohy mijoro: https://elfaro.net/es/202005/columnas/24436/Una-d%C3%A9cada-de-lucha-contra-la-LGBTIfobia-en-El-Salvador.htm
 Lalàna Famaizana Salvadoriàna: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf
 Fanambarana Erantany Momba ny Zon'Olombelona: https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
 Lalampanorenan'ny Repoblika: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/salvador/salvdr-s.htm